★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်တို့၏ ဂုစ်ယူဖွယ် စောက်ရှက်မရှိတဲ့ Mujra အက
မွတ်ဆလင်တို့၏ ဂုစ်ယူဖွယ် စောက်ရှက်မရှိတဲ့ Mujra အက
မွတ်ဆလင်တွေဟာ အရင်တုံးက ဘာသာရေးကို စစ်တိုက်ပြီးချဲ့ထွင်ပါတယ်။ မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ဘာသာပြောင်းခိုင်းပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ အဲလိုလုပ်လို့မရတော့ လိမ်ညာတဲ့ နည်းလမ်းကို အသုံးပြုလာပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာဟာ မိန်းမတွေရဲ့ သိက္ခာကို ကာကွယ်တဲ့ ဘာသာအဖြစ် ပြောင်းလဲ ပုံဖေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သတင်းတွေ ကြည့်ရင်လည်း အဲလိုပဲ အမှတ်မှားအောင် အကွက်ကျကျ လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ သူတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ကျောက်တုံးကြီးဟာ မိန်းမရဲ့ ဇတ်အင်္ဂါကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိုဟာမက်နဲ့ သူရဲ့ မိန်းမတွေဟာ တဏှာရူးများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတွေသိထားသူများ အမှန်ကို မြင်နိုင်ဖို့ Mujra အကတွေကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
တချို့က Mujra အကကို အိန္ဒိယမှာ စတင်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါကစ္စတန်ကို မွတ်ဆလင်တွေ သိမ်းပိုက်ပြီးမှ ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ အကသာဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်မိန်မတွေက ခွေးမတွေလို လေးဘက်ထောက်ပြီး ဖင်ပဲ လှုပ်ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်မွတ်ဆလင်မတွေက လှုပ်တဲ့နေရာပိုများပါတယ်။ နွားမကြီးတွေလို နို့တွေကိုလှုပ်ပါတယ်။ (နွားမသာ ဆိုရင် တော်တော် တန်ဖိုးရှိမှာပဲ) ပေါင်ကားပါတယ်။ အ၀တ်တွေကို လှန်ပါတယ်။ မိုးရေထဲမှာပဲ သီချင်းဆိုပါတယ်။ ပါကစ္စတန် မွတ်ဆလင်မတွေဟာ ဖာသည်မတွေထက်တောင် အရှက်သိက္ခာမဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း အခုဗီဒီယိုမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မိုဟာမက်ရဲ့ မိန်းမတွေဟာ ဖာသည်နဲ့ မကွာပါဘူး။ Aisha ဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကို တခြားယောကျားနဲ့ ဖောက်ပြန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ Hadith ဖတ်သူတိုင်း အဲဒီအဖြစ်ကို သိပါတယ်။ မွတ်ဆလင် ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့ ကုလားများလည်း ဆက်လက် ဂုဏ်ယူနိုင်ကျပါစေ။ မင်းတို့တွေအဖွား မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး မွတ်ဆလင်ဖြစ်အတင်းပြောင်းခံထားရတဲ့အဖြစ်ကိုလည်း မသိဟန်ဆောင်နေပါ။ အရူးစိတ်ချမ်းသာမှ ကမ္ဘာကြီးက ငြိမ်းချမ်းပါတယ်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:22 AM
nice shakes and big boodies .. cool!
Those indian Songs are also nice to listen.
Gawdama grown up place India ka lar advertising lar ? haha
budha ka lar myo day ga sout yan sexy phyit thar bae naw :D
budha ga lu lo ma nay dat lo go to forest n live like animal lar ? pee dot dog lo chon swal sar lite thay dal ..haha ...nice barstered !!
sit tal monk ga ..haha hot tal ... girls see yin hnar boo za gar taung lite pyaw lite thay dal ..haha ..
monks loe dar khan chin dat main ma dway ga phone gyi kyaung regular twar ..hote lo :D
thats y all buhda ka lar followers got the daung zar life .. lowest life ..lowest culture ...sout sint ma shi dar dway lote ...gay works like this kind of website open peeayay ma yaaphet ma ya lote
Bar thar phyat.thar tha nar phyatalote ko bal mi kaung pha khin thar tha mee mha ma lote phoo.but phar thal ma nat sat mway htar thu dway nat..kway loe ma thar dway lote tal coz you have no culture
Besides..nobody is that fool to believe ur set ups and lies ...ur website is quite entertaining this box isagood chee dwin too...nice to throw all the shits in here ..thanks
u really want to do anti-muslim ? if u r brave enough go to yell at muslim yat kwat lay hta main out ka lat thee ma pya nat.. ka yaw ..ka yaw .shat..shat
oh...poor pathetic people ..min dot ba wa ga lal kwar ..thay dar po kg mal ..malaysia twar pee muslim dway yat kyun lote pee muslim pay sar kan sar sarr nay ya pee dot anti-muslim aww ya dar .
min dot lal chaung koakhu..nga chay ma nat ka law htote lite yin muslim pay sar kan sar sarr htar dar dway htwat lar mhar kwa !!! oh...poor pathetic people ..min dot ba wa ga lal kwar ..
politically u all loosed already ...cosakhu min dot calling mohamed(sol) more then sout budha ka lar mo lar ..u all r under islamic influencial ..shat ..shat ..:P
dar nat myar..sout shat ma shi aww nay ja dal ..anti-islamathinn daw so pee muslim's serventathinn daw so taw po thind taw mal naw..hee..hee